ဘလွန်းဒီအော်ဆုအတွက် ဆန်ကာတင် ပထမဆုံး ၅ ဦးစာရင်း ထွက်ပေါ်လာ – Sport – International Sports – Duwun
ဘလွန်းဒီအော်ဆုအတွက် ဆန်ကာတင် ပထမဆုံး ၅ ဦးစာရင်း ထွက်ပေါ်လာ
Kg Htet 2018-10-08 10:31:02.0, 2018-10-08 10:31:02.0
ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ကာရင်ဘန်ဇီးမားနဲ့ လီဗာပူးအသင်းဂိုးသမား အယ်လီဆင်တို့ဟာ ၂၀၁၈ ဘလွန်းဒီအော်ဆုအတွက် ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဆန်ကာတင် ၅ ဦးစာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘန်ဇီးမားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ၃ နှစ်ဆက်ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်ကာတင် ၅ ဦးစာရင်းထဲမှာ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်း ကြယ်ပွင့်တိုက်စစ်မှူး အဂူရို၊ ရီးရဲမက်ဒရစ်ကြယ်ပွင့်တောင်ပံကစားသမား ဂါရတ်ဘေးလ်၊ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းရဲ့ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီတို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ရီးရဲမက်ဒရစ်တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီးမားကို ဘလွန်းဒီအော်ဆုအတွက် ပထမဆုံးဆန်ကာတင် ၅ ဦးစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခဲ့တာကို အများက အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဘန်ဇီးမားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံး လာလီဂါသွင်းဂိုး ၅ ဂိုးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး ၅ သာ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ၃ နှစ်ဆက် ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တာတစ်ခုတည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ဇီးမားရဲ့အသင်းဖော် ဂါရတ်ဘေးလ်ကတော့ ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ထိုက်တန်သူဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းကို အနိုင်ရရှိစေမယ့် အဓိက သွင်းဂိုး ၂ ဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ကြယ်ပွင့်တိုက်စစ်မှူး အဂူရိုဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပြိုင်ပွဲစုံမှာ စုစုပေါင်းသွင်းဂိုး ၃၀ အထိ သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား၊ လိဂ်ဖလားတို့ကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ ထိုက်တန်သူဖြစ်ပါတယ်။
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းရဲ့တသက်တာထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ကာဗာနီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက လီဂူးဝမ်းသွင်းဂိုး ၂၈ ဂိုးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး ၇ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ကာဗာနီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းနဲ့အတူ လီဂူးဝမ်းဖလား၊ Coupe de France ဖလား၊ Coupe de la Ligue ဖလား၊ Trophee des Champions ဖလားတို့ကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ ထိုက်တန်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဘတ်ပီကြောင့် နေမာကို ဘာစီလိုနာမှာ ပြန်မြင်တွေ့ရတော့မှာလား?
ဂါရတ်ဘေးလ်ကြောင့် ဒေါသထွက်နေပြီး ရော်နယ်ဒိုကို ရောင်းမိတာ နောင်တရနေပြီဖြစ်တဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ်
မန်ယူအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရယူပေးနိုင်တဲ့နည်းပြကို ပြောပြလိုက်တဲ့ နတ်ဘုရားကြီး
မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ စံချိန်သစ်တင်နေတဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ်
ဂျီနိုအာနဲ့ပွဲက သွင်းဂိုးကြောင့် ဥရောပစံချိန်သစ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို
အသင်းဖော်ရော်နယ်ဒိုကို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမားဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူကို ပြောလိုက်တဲ့ ပီဂျာနစ်
ရော်နယ်ဒိုနောက်ကို မာဆယ်လို လိုက်တော့မယ်လို့ သတင်းများ ထွက်ပေါ်
ရော်နယ်ဒိုရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ နတ်ဘုရားကြီးကို ခေါ်ယူမယ့် ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်း
လွတ်သွားတဲ့ငါး ကြီးနေတဲ့အဖြစ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘာစီလိုနာ
အူစိန်ဘော့ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာချုပ်ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီ
၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရော်နယ်ဒို၊မက်ဆီ မပါပဲ ကစားတော့မယ့် အယ်ကလက်စီကို တိုက်ပွဲ
El Clasico ပွဲကို မက်ဆီလို လွဲချော်တော့မယ့် ရီးရဲလ်တိုက်စစ်မှူး
မေဂျာလိဂ်မှာ ရွန်နီကို ရပ်တန့်နိုင်မယ့်သူ မရှိသေးဘူးလား?
နေမာနေရာကို ဂရစ်ဇ်မန်းနဲ့ အစားထိုးဖို့ရှိနေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ